Autodesk Na-ewebata "Nnukwu Roomlọ ahụ" Maka Ndị Ọzụzụ Constructionlọ
Autodesk Construction Solutions n'oge na-adịbeghị anya kwupụtara mwepụta nke Nnukwu Roomlọ ahụ, obodo dị n'ịntanetị nke na-enye ndị ọkachamara iwu ụlọ ohere ka ha na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ma jikọọ na ndị otu Autodesk Construction Cloud. Nnukwu ụlọ ahụ bụ ebe nrụọrụ weebụ akọwapụtara nke ọma nye ndị ọkachamara na ...
Ihe ngwanrọ kacha ewu ewu - onyinye ntanye kọmpụta 2018
Nke a bụ asọmpi na-akwụghachi ụgwọ ọrụ kacha mma nke ngwanrọ lekwasịrị anya na Nhazi, Injinia na Ewu. Ndepụta ikpeazụ a na-agwa anyị otu asọmpi dị n'etiti ndị na-eweta ihe ngwọta maka usoro maka ịrụ ọrụ geo-engineering na nke iri na atọ. Anyị akara ụfọdụ ụdị nke nhọrọ anyị na agba dị iche iche iji kwado ...
BIM - Uwa m gaara arọ iri n’afọ iri abụọ gara aga
Afọ 20 mgbe nke a gasịrị, enwere m ike ijikọ BIM dị ka mmalite ọ nọchitere n'oge ahụ, na-ahapụ bọọdụ ịbịaru na nyocha akwụkwọ maka faịlụ CAD. Nke ahụ bụ ezigbo mgbanwe, na-eche na ọ sitere na ịbụ onye omenkà eserese na akwụkwọ ọgụgụ mgbako + mgbako + Lotus 123. O yiri ihe ịtụnanya ikwere ...
Apụta, Engineering, Microstation-Bentley, My egeomates
Usoro Nhazi AutoCAD n'efu 3D - Revit - Microstation V8i 3D
Taa, ịntanetị dị nso, ịmụ ihe abụghịzi ihe ngọpụ. Site na ịmara algọridim ndị ahụ ị na-amabeghịrịrị iji wuo Rubik's cube na ụlọ akwụkwọ sekọndrị iji nweta ihe ọmụmụ AutoCAD n'efu na ntanetị. Mkpa nke ihe nlere 3D Anyị maara na ọdịnihu nke CAD dị na ụdị ngosi akpọrọ BIM.…
AutoDesk Bentley Systems obodo 3D